... hadda ... - Geofumadas
... hadda ...
Sebtember, 2013 Leisure / waxyi
Kaliya marka sariirta isbeddelka ahi ay bilaabato inay xoqdo ... waxaan kula wadaagaa mid ka mid ah rukumada ugu fiican ee aan ka arkay mid ka mid ah lataliyahayga.
Maadaama aanan rabin inaan kuugu daro boostada guud iyo xarfaha macquulka ah (waxaad tahay arrin kale) waan kuu fasiray:
In 09 ah: maalinta 30 28 of June ee sanadka 2013 ka dib dhalashada Rabbigeenna, SAXIIXAY joojin waqti deganaansho ay xafiiska ku yaal meeshan yeedhay Honduras.
Waxa si fiican loo yaqaan aan cabista yar in sentimentality iyo lacrimal in kastoo, by dint ahaanshaha baarka daacad ah, waa in aan qiran dhaqdhaqaaqa gudaha caloolxumo iyo cidhiidhi. Iyo meel kasta oo aad ka tageyso wax iyo wax aad qaadato. Midda labaad waa waxyaabo fiican, marka hore waxaan rajeynayaa in sidoo kale.
Jingo ma beenin karo waxa ay ahayd farxad leh oo dhan oo idinka mid ah ka shaqeeya, iyo inta aad xirfadlayaasha weyn kasta dhinaca is illowsiin kartaa in ay yihiin dadka wanaagsan (xaqiiqo ah in loogu soo bandhigay waxa aan u lahaa in ay u adkaysan ).
Ma rabo inaad nasiibsato, sababtoo ah waxaad hubaal u yeelan doontaa. Cagahaaga dhulka ku hayso oo ha iibin muraayadaha (waxyaabaha muhiimka ah had iyo jeer muhiim ayay u yihiin waddan kasta) iyo Vasco Isbaanishku waxay ogtahay waxaas.
Adiga oo dhan aad u sarreeya oo dhan, oo ku arko
Agur iyo lakin ikusiko dugu
Ayaan waqti waagu si ay u diyaariyaan wax dareen ah in keentaa smoothie a Herba Life marka kaliya foorida codka waardiyayaasha, iyo TV jiririco yeeray in channel deegaanka iyo dadkiisa ay ku nastaan ​​diray.
Waxaan mar walba sheegayay in sida kaliya ee ay u joojiyaan wax aad samayn, iyo inaad wax badan qiimeeyaa ... waa in la helo wax kale in uu yahay sida xiiso leh farshaxanka geofumar jidka keliya ee aan ogahay - ilaa tusale. Xilligaan ayaa imika yimid maanta oo ah wareega xiran iyo mid cusub ayaa billaabanaya.
Hadda, ma jiraan wax intaas ka badan oo la sheego. Waxaa jira threads isku xidha xidhiidhada dib, dhowraan saaxiibtinimada ... taasi waa wax cusub. Of cusub: Isku koox xirfadaha ee heerka sare, qaabaynta nidaam Paradigma, iyadoo la isticmaalayo Métrica 3 iyo fikirka xaqiiqada Domain Maamulka Land ee Model galay ... waxa ku filan in la kala saaro soohdinta u dhaxaysa kafeega qiiq iyo version waxaysidoo ee adrenaline waxyiga
Post Previous«Previous OkMap, ugu fiican ee la abuuro oo wax ka beddelo khariidadaha GPS. BILAASH AH
Post Next Bentley wuxuu ku dhawaaqay mashruucyada kama dambeysta ah ee Be Inspired Awards 2013Next »